မန္တလေးသား မန္တလေးသို.ပြန်ရောက်သောအခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မန္တလေးသား မန္တလေးသို.ပြန်ရောက်သောအခါ
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Jan 13, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
ကျွန်တော်မန်းလေးကို အလုပ်နဲပြန်ရတယ်… အဝေပြေးလမ်းကနေ မန်းလေး မြို.ကို စ၀င်တဲ့အချိန်မှာ.. နန်းတော်ကြီးနဲ. အ၀ိုင်းက ခန်.ခန်.ညားညားကြီး ကြိုနေတယ်ဗျာ… ကျွဲဆယ်ကန်ကားဂိတ် ရောက်တော့ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ရင်ပဲ ရင်ထဲမှာ အေးခနဲ ခံစားလိုက်ရတယ်.. မန်းလေးဆောင်းအရသာကိုပေါ့ .. အင်းအဲဒီလိုပဲ ကြည်းနူးနေတုန်း ကားအပေါက်ဝမှာ သူထက်ငါ ခရီးသည်လုနေကြတဲ့ ဆိုင်ကယ် ကိုကိုတက်ခ်စီသမား များအသံကို ကြားလိုက်ရတာ… လာကြိုတဲ့သူစောင့်နေရင်း ဖြေလိုက်ရတဲ့သူတွေ အယောက်၂၀လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်.. အောင်မလေးလေး..နောက်တော့ စကားကိုပြန်မပြောတော့ဘူး လူမြင်တာနဲ. ခေါင်းပဲခါနေတော့တယ်. ဟဟဟ…
ဒါနဲ.အိမ်ကိုရောက်ပြီးရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲပြီး တစ်နှစ်လောက် မသောက်ရတဲ့ မန်းလေးက လက်ဘက်ရည်လေးကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ. အငမ်းမရ သွားသောက်တာပေါ့ဘယ်ရမလဲ ဟဲဟဲ… အဲဒါနဲ. မန်းလေးမှာ လမ်းတွေများပြင်ထားလိုက်လိုက် ကျယ်လဲကျယ် ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဗျ.. main လမ်းတွေကိုနော်… ပြီးတော့ ပေါများလိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေ အမလေးလေး ၇၈လမ်းပေါ်ဆို မနက်မနက်ဆို ဆိုင်ကယ်အုပ်ကြီး ရွေ.နေလိုက်တာ.. ပုရွက်ဆိတ် အုံလိုက်ကြီး ပြေးလာတာကြနေတာပဲ….
ဒါနဲ.ပြောရအုံးမယ်.. မန်းလေး ၄၁လမ်းကုန်းကျော်၊ ၃၅လမ်းကုန်းကျော်တွေပေါ်ဆိုင်ကယ်မတက်ရတော့ဘူးဗျ.. ကိုယ်တွေ.ကိုယ်တွေ. ကျွန်တော် ရုံးသွားတော့ ခပ်တည်တည်နဲ. ကုန်းကျော်ပေါ်တက်သွားတာ ခင်စောမူ ကုန်းဆင်းလိုက်တော့ ဖမ်းခံရပါလေရော.. ထင်တော့ထင်သား ငါမောင်းလာတာ ကုန်းကျော်ပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှမတွေ.ပါဘူးလို. ဟိဟိ… ဒါနဲ. ကိုကို မော်တော်ပီကယ်ကို ပီကယ်ဝယ်စားဖို. သုံးထောင်းမုန်းဖိုးပေးလိုက်တယ်လေ.. သူလဲ ကလေးလေးကျနေတာပဲ ပျော်သွားလိုက်တာ.. ဟဟဟဟ (ဒါတောင်သူကပြောသေးတယ်.. ညီလေးမင်း ကုန်းဆင်းပဲဖမ်းလိုက်တာတဲ့ လိုင်စင်မပါတာကို လျော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့လေ.. ဟဟဟဟ (ကျေးဇူးကြီးမားလိုက်တာ)..
ကဲ ရွာသူ၊၇ွာသားတို.ရေ ကုန်းဆင်းရင် ဖမ်းခံရမယ်နော ………
ပြီးတော့ တစ်လမ်းမောင်းတွေလဲ အများကြီး သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာ.. အခုကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်မောင်းရုံးသွားရင်.. လမ်းထိပ်မှာ တပ်ထားတဲ့ မျှားဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကြည့်ပြီးမှာ အဲဒီလမ်းထဲ ချိုးဝင်တော့တယ်.. တော်ကြာမုန်.ဖိုးပေးနေရမှာဆိုးလို.လေ..
ပြီးတော့ရှိသေးတယ် အခုကျွန်တော်ရောက်တာ နှစ်ရက်တပိုင်းရှိသေးတယ်.. ဆိုင်ကယ်တိုက်တာ ၁၀ ခါလောက်တွေ.ရတယ်.. အမယ်အရင်တုန်းကဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ.တစ်စီး တိုက်လိုက်ကြ ချိတ်လိုက်ကြရင် မဆုံးတော့ဘူး အခုများဆို တိုက်လို. ဒူးကာ ကြီးပြုတ်သွားတာတောင် ရတယ်ရတယ်နဲ. ခဏလေးနဲ.ပြီးသွားကြတယ်ဗျာ… ဆိုင်ကယ်တိုက်တာ မန်းလေးမှာ ထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်နေကြပေါ့…..
အထူးအစမ်း မြင်ကွင်းတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်.. နောက်နေ.မှ ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ပေးအုံးမယ်..
နောက်ပြီး လေးပေါက်ကြီးကိုရှာပြီး ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်လိုက်အုံးမယ်လေ…
has written 79 post in this Website..
View all posts by ရွှေတိုက်စိုး →
သုံးထောင်ဘဲ ပေးခဲ့ရတာဆိုတော့ လွှတ်တန်ပါတယ် လို့ ဘဲ ပြောချင်ပါ၏
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၊ ယခု ဒဏ်ငွေပေါက်ကြေးမှာ ၂သောင်းကျော်၏
အဟီး … ရန်ကုန်မှာ အလှူငွေမထည့်ခဲ့ရလို့ … မန္တလေးရောက်တုန်း ကုသိုလ်ယူတာ .. အဟီး .. အဲ့လိုကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ … ငါတို့ ရွာသားကွ … ဟီးဟီး
ဒီက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လှူချင်တာကိုးဗျ… မအိတုံ ရ ဟဟဟဟ မအိတုံလှူချင်လဲပြောလေ..
ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါအဖမ်းခံပြီး အလှူငွေထည့်ခဲ့ပေးမယ်သိလား.. ရန်ကုန်ရောက်မှပြန်ပေးပေါ့နော… ဟဲဟဲ
ကျနော်တော် မန်းတလေးမှာနေတုန်းက လိုင်းစင်စစ်တဲ့ မော်တော်ပီကယ်တွေနဲ့တွေ့ဘူးတယ်၊
ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်က အိမ်တော်ရာဘုရားကနေ 26 လမ်းပေါ်ကိုထွက်လိုက်တော့ မော်တော်ပီကယ် အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုးပါလေရော၊ မော်တော်ပီကယ် ၅ယောက်လောက် ဆိုင်ကယ်ကို လာတားပြီး ပိတ်ထားကြတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လိုင်စင်ပြမယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ရဲ့ အစုံထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ရှာတာပေါ့၊ ကျနော့်ပိုက်ဆံအိတ်က အိမ်မှာကျန်ခဲ့တာ၊ အဲ့လိုဟိုရှာဒီရှာ အိတ်ထဲလုပ်နေတုန်း မော်တော်ပီကယ် လေးယောက်ကပြန်ထွက်သွားပြီး လိုင်းစင်စစ်မယ့် မော်တော်ပီကယ် တစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ ရှာလို့မတွေ့တော့ လိုင်းစင်မပါခဲ့ဘူးလို့ပြောပြီး တစ်သောင်းကျော် ဆောင်ရမှာကို နှမျောတာရော၊ ကြောက်တာရောနဲ့ လူက ဒူးတုန်နေတာ၊ အဲ့ဒီမှာပဲ မော်တော်ပီကယ်က အစ်မရယ် အဲ့လောက်လည်း ကြောက်ပြီး ဒူးတုန်မနေပါနဲ့တဲ့ အစ်မကို မဖမ်းပါဘူး၊ လွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ အစ်မနောက်တစ်ခါတော့ လိုင်းစင်ကို သေချာဆောင်ထားပါတဲ့ အခုတော့ ကျနော့်ကို လက်ဖက်ရည်လိုက်တိုက်တဲ့ သူအဲ့လိုပြောတော့ ၀မ်းသာသွားတယ်၊ ဟုတ် လက်ဖက်ရည်တော့ တိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးမှ သတိရတာ ပိုက်ဆံအိတ်ပါကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမပါဘူးလေ၊ ကျနော်က စာရွက်စာတမ်းတွေရောထည့်တော့ လိုင်စင်နဲ့ ပိုက်ဆံကို အိတ်အသေးနဲ့ထည့်ထည့်ထားတာဆိုတော့ သူ့ကို မျက်နှာငယ်နဲ့ပဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်တိုက်ချင်ပေမယ့် ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မပါခဲ့ဘူးလို့ပြောတော့ ရီပြီး ရပါတယ်၊ ရပါတယ်သွားပါ နောက်ဆို မကျန်ခဲ့စေနဲ့ပေါ့လို့ပြောပြီး သွားလို့ရပါပြီးဆိုပြီးပြောလို့ အဲ့နားကနေ အမြန်မောင်းထွက်လာခဲ့ရတယ် ……
အော် အစ်မရယ်.. နောက်ဆို တီးမစ်ထုပ်လေးဆောင်ထားပေါ့ လက်ဖက်ရည်လိုက်တိုက်ဆိုရင် ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ…….
တော်ကြာ ဒဏ်ငွေမဆောင်နဲ့စည်းကမ်းဖောက်ရင် စခန်းမှာ တစ်ညလာအိပ်ဆိုတဲ့ဥပဒေသာရှိရင်
…………………………………………..တွမ် တွမ့် တွန်………………
ဒါဆိုလဲ ကောင်းတာပေါ့လေးပေါက်ရယ် ပို.စ်တင်စရာ အချုပ်ခန်း ဓာတ်ပုံရတာပေါ့ ဟဲဟဲဟဲ….
မန္တလေးမှာ ယာဉ်မောင်းနေရ သူတွေအတွက်ကတော့ သတိတစ်ချက်ပေါ့ လို့မရဘူးဗျို့။
မှန်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ဘယ်အချိန် ဘယ်သူဝင်လာတိုက်ရင် ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲပါ သတိကြီးကြီးနဲ့ စီးနေ၊ မောင်းနေရတာဗျ။ စည်းကမ်းကို ထိမ်းရမယ့် သူတွေကပါ ယူနီဖေါင်းနဲ့ ဦးထုပ်မပါပဲ စီးနေတာ၊ လမ်းပြောင်းပြန်ဝင်တာ၊ ၃ယောက်စီးနေကြမှတော့…………..ဗျာ
နီးနီးသွားသွား ဝေးဝေးသွား အမြဲတန်းဆောင်ထားတာ လိုင်စင်
တရုတ်ဦးထုပ်တွေက ကော်သားပျော့တယ် လဲကျရင် ကွဲတယ်
ယိုးဒယားက မာလို့ ဖရဲကြိုက်ကြိုက်
ဟိုနေ့က ညနေကြီး ၃၇လမ်းကို ရှေ့ကဆိုင်ကယ်ကွေ့လို့ လိုက်ကွေ့လိုက်တာ ပြီးမှ တစ်လမ်းမောင်းဖြစ်နေတာ ဖမ်းခံရပြီထင်နေတာ တစ်ယောက်မှမရှိလို့ ကံကောင်းသွားတယ်
အဲ့ဒီတလမ်းမောင်းများက သွားနေကျလူတောင် တခါတခါ ယောင်တယ် မနည်းကို သတိထားရတယ်
ဒီမှာကတော့ ဟုတ်တယ် ဆိုင်ကယ်တိုက်တာ တကယ်ကို ထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်နေပြီ..
ဖရဲသီးပြောတာ ထောက်ခံတယ် ယိုးဒယားဦးထုပ်က တကယ်ကောင်းတယ်..
တိုက်ပါများတော့ နားလည်မှုတွေ.သဘောထားတွေတောင် ကြီးကုန်ပါပကောလားဗျာ.
မိုးစက်သူငယ်ချင်း မန္တလေးသူတွေပြောတာတော့ မော်တော်ပီကယ်တွေက
ချောတဲ့ကောင်မလေးတွေဆို ဒဏ်ငွေမရိုက်ဘူးတဲ့ နည်းနည်းပါးပါးဆုံးမစကားပြောပြီး
အမလေး အခုမရတော့ဘူးဗျ ချောလေပိုဖမ်းလေပဲ.. ကျွန်တော်တောင်ဖမ်းခံရသေးတာပဲ.. မော်တော်ပီကယ်မကြီးက မောင်လေး နဲနဲဖမ်းမယ်နော်တဲ့ ဟိဟိဟိ ချောလို.အဖမ်းမခံရတာတော့ လက်မခံဘူး ကျွန်တော်တောင်အဖမ်းခံရသေးတာပဲ ဟဲဟဲဟဲ
မန်းတလေးကို လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်လောက်က ဒီဇင်ဘာကြီးရောက်သွားတယ်…
အေးလိုက်တာဗျာ…ရန်ကုန်မှာ ပူနေတဲ့အချိန် အဲဒီမှာအေးလိုက်တာ…
တောင်ပေါ်ကကြောင် ဆိုင်ကယ်မစီးရဲတာတော့ သိက္ခာကျခဲသဗျား…
အင်းကျုပ်ဆို ငွေ ၃၀၀၀ မက ကုန်ခဲ့ဖူးပါတယ် ကုန်ခဲ့ ဖူးပါတယ် တောင်းပန်ရတာ
ရန်ကုန်မှာ အနေကြာပြီးများ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မန်းလေးသားဆိုပြီး…
မမရယ် မန်းလေးသားတွေသဘောကောင်းတာကို ပြတာပါ.. မော်တော်ပီကယ်တွေမှာ သူတို. တွေ မနက်မနက်လက်ဘက်ရည်ဖိုးမရှိမှာစိုးလို.ပါ.. ဟီးဟီးဟီး
ကုန်းကျော်ပေါ်မဖြတ်ရဘူးလို့ သတင်းစာထဲမှာ တစ်ရက်ပါတယ်လေကွယ်။
3000ပေးရင် ရတယ်ဆိုတာ ညှိလိုက်လို့ပါ.
အခုလိုစည်းကမ်းဖောက်တာကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ဘူး ကာယကံရှင်နဲ့ဘဲဆိုင်တယ်လေ။
အင်းဒီကတော့ လိုင်စင်မပါ လို့ တားခံရတုန်းက ငိုပြလိုက်တာ ထုံးဖြူ ကြီးက သမီးရယ်မငို နဲ့ တော နောက်လိုင်စင်ဆောင်ထားနော်လို့ ပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်
ကိုတိုက် ကုန်းဆင်းရင် 3000 ပေးရတာဟုတ်လားဗျ ဒါဆိုလည်း မကုန်းပဲဆင်းပေါ့ဗျာ နောက်တစ်ခါသွားရင်